Gooseberry | March 2020
Ugu Weyn Ee Gooseberry
Faa'iidooyinka iyo waxyeelooyinka miro-geedka, sida miro-beerku u saameeyaan caafimaadka aadanaha
Ma aha in qof kastaa ogyahay faa'iidooyinka iyo siyaabo badan oo loo isticmaalo gooseberries, laakiin berry waa mid ka mid ah qaybaha dhadhanka ah ee suxuunta, daawada dabiiciga ah iyo walxo cayriin oo loogu talagalay qurxinta dabiiciga ah. Waxyaabaha kiimikada ah ee "sabiib ah waqooyiga" Gooseberry, oo sidoo kale loo yaqaan "agrus" iyo "canab woqooyi", ayaa ka mid ah caleenta Currant.
Siyaabaha loo goosanayo gooseberries ee xilliga jiilaalka, cuntooyinka caanka ah
Xilliga kulaylaha iyo dayrta, dabiiciga ayaa noo keena waxyaabo badan oo ah nooca berry, miraha iyo khudaarta, iyo si ay ugu raaxaystaan ​​dhadhanka jiilaalka, dadku waxay la yimaadaan siyaabo kala duwan oo loo kaydiyo. Fitamiino badan iyo nafaqooyin ayaa ku jira miro yar yar, oo ururin ah oo bilaabma dhammaadka July - horraantii Agoosto. Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, gooseberries ayaa lagu qiimeeyaa faa'iidadooda iyo dhadhanka wanaagsan.
Sida loo sameeyo macaanka miro-mariinka: cuntada ugu badan ee cuntada la cuno
Gooseberry waa warshad caddaalad caadi ah oo laga heli karo qaybo kala duwan oo adduunka ah: ma aha oo kaliya aagahayaga, laakiin sidoo kale in America, iyo xitaa Afrika. Caannimadu waxay inta badan u sabab u tahay qaabka faa'iido leh ee miraha ay dadku cunaan ma aha oo kaliya cusub, laakiin sidoo kale laga goostay qaabka macaanka ama saxaraha.
Sidee loo kariyaa gooseberries guriga: tallaabo tallaabo tallaabo leh sawiro
Iyadoo ilaalinta khudradda iyo miraha xilliga jiilaalka, badanaa sababo badan oo ay u dhaafaan miro yar, inkastoo berrida ay soo saartaa qaybo badan oo la jarjaray. Iyadoo ay suurtagal tahay in la soo saaro badeecadan, cuntooyinka iyo sifooyinka ilaalinta berry, waxaan ka fekereynaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan mawduucaan. Diyaarinta gooseberries For goosashada jiilaalka waxaa muhiim ah in la isticmaalo berry tayo sare leh - waa inay noqdaan kuwo xoog leh, wareegsan, iyada oo aan waxyeello iyo qoyaan.
Sida loo sameeyo maraqa gooseberry ee guriga: xulasho ah raashinka cuntooyinka hilibka ama kalluunka
Wixii ka badan toban sano, cutlets iyo bataatooyinka waxaa la cunaa ketchup, majones, mustard ama adjika. Laakiin mararka qaarkood waxaad rabtaa wax cusub. Haddii aad rabto inaad kala soocdo menu-kaaga, ka bilow sooska. Lama wada karkariyo yaanyada, laakiin laga bilaabo gooseberries, waxay ka dhigi doontaa saxanka hilibka ee ugu caansan oo aan caadi ahayn oo aad u dhadhan fiican leh.
Sida loo sameeyo macaanka miro-mariinka: waa tallaabo tallaabo tallaabo ah oo sawir leh
Dhammaanteen waxaan jecel nahay inaan ku raaxeysanno macaanka delicious jiilaalka. Diyaarintiisa waxaa loo isticmaalay noocyo kala duwan oo miraha iyo nooca berry ah. Maqaalkeenu wuxuu soo bandhigi doonaa fursado dhowr ah oo macaanka miiran, sida qof kastoo awoodi doona inuu karsado cuntadan delicious guriga. Diyaarinta miro-dhaliyaha Bilowga cunto karinta waa marxalad muhiim ah - diyaargarowga beeraha.
Sidee loo sameeyaa khamri cabitaanka miro
Waxaa jira noocyo kala duwan oo cabitaan ah. Qaar ka mid ah waxaa loogu talagalay in ay ka aamusaan harraadkooda, kuwa kale, liddi ku ah, waxaa loo isticmaalaa saameyntooda gubashada. Cabitaanada noocan oo kale ah ayaa ku jira khamriga ka kooban. Cabitaanka khamriga tayada leh ayaa laga sameeyaa alaabta ceeriin dabiiciga ah, oo ku jira sonkorta dhirta. Inta lagu jiro halsano, waxay ku jajabaan dhismo fudud waxayna soo saaraan aalkolo, oo ay ka mid yihiin ethyl.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Gooseberry 2020